Nobahanana Nandritra Ny Androm-pifidianana Ny WhatsApp sy Viber Tao Montenegro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2016 10:28 GMT
“Inoy na tsia, birao fandatsaham-bato Komarno ao an-tanànan'ny Bar“, hoy ny siokan'ny Foiben'ny Tetezamita Demaokratika. Sary avy amin'ny CDT, nahazoan-dalana.
Voaloton'ny fiampangana tsy fanarahan-dalàna ny fifidianana parlemantera tao Montenegro tamin'ny 16 Oktobra 2016, hoy ny tatitra tamin'ny tambajotra sosialy, ary voaràra nandritra ny fotoana tsy dia maharitra ny WhatsApp, Viber sy ny fampiharana fandefasan-kafatra sahala amin'izany.
Nandidy ireo mpandraharahan'ny fifandraisan-davitra hanakana ny fampiasa fandefasan-kafatra ny Sampan-draharaha Mpandrindra ny Tolo-pifandraisana Elekitronika sy Paositra. Nilaza ny Sampana fa natao hiarovana ny mpiserasera tsy hahazo “fifandraisana tsy ilaina”, fanondroana ofisialy ny spam izay mety mihatra amin'ny hafatra faobe nalefa amin'ny anaran'ireo kandida manokana na antoko ara-politika no anton'ny fandraràna.
Tsy nety namaly ny fanontaniana avy amin'ny gazety Vijesti momba ny anton'ity fanapahan-kevitra ity i Zorana Sekulić, tale mpanatanteraka ao amin'ny Sampan-draharaha. Tamin'ny tatitra taty aoriana navoakan'ny Vijesti, namariparitra ny antso an-tariby nataon'izy ireo tamin'i Sekulić izy:
“Iza no nanome zo anareo hiantso ahy? Antsoy aho rahampitso amin'ny 8 maraina. Iza no nanome zo anareo hanorisory ahy,” hoy i Sekulić. Taorian'ny antso faharoa, mbola tsy nety nanazava ny fanapahan-kevitry ny Sampan-draharaha izy ary nilaza fa “tsy manome fanambarana ho an'ny Vijesti” izy.
Nisy nanafika nandritra ny androm-pifidianana ny tranonkalan'ny Foiben'ny Tetezamita Demaokratika (CDT), Fikambanana tsy miankina lehibe mpanaramaso ny fifidianana ao Montenegro, ka tsy azo nidirana nandritra ny atoandro sy hariva.
Nitranga tao amin'ny media sosialy ny adihevitra momba ny fifidianana, ka nizara vaovao momba ny fifidianana tamin'ny fiteny Slavy ao an-toerana tamin'ny alalan'ny tenirohy #IzboriCG (Fifidianana Montenegro) sy ny anaran'ny firenena #CrnaGora, ary koa tamin'ny teny Anglisy tamin'ny tenirohy mitovy aminy #ElectionsMNE sy #Montenegro ny mpiserasera aterineto.
Ny fandraràna ny fampiharana fandefasan-kafatra
Lohahevitra voalohany tamin'ny resa-pifidianana tao amin'ny haino aman-jery sosialy ny fanakatonana ny fampiharana fandefasan-kafatra. Raha tsy namoaka vaovao momba ny fanapahan-keviny tamin'ny tranonkala kosa ny Sampan-draharana, nandefa andiana sioka (1,2,3) manazava ny baiko fandraràna ny mpandraharaha eo an-toerana Telenor. Hoy ny vakiny raha fintinina:
Nanome baiko ireo mpandraharahan'ny fifaindraisan-davitra ny Sampan-draharahan'ny Tolo-pifandraisandavitra Elektronika sy ny Paositra mba hanakatona ny safidy hampiasa fampiharana Viber, WhatsApp sy ny toy izany, izay nampiasaina androany nanaovana fifandraisana tsy notadiavina tamin'ny mpiserasera. Hakatona ny fahafahana mampiasa ireo tolotra ireo mandra-pilazan'ny Sampan-draharaha ny fiafaran'ny fandraràna avy amin'ny filazana manokana .
Melohinay ny fanapahan-kevitry ny Sampan-draharaha hanakana ny Viber sy ny WhatsApp izay mametra ny fifandraisana sy fizaram-baovao.
Mangataka amin'ireo mpanjohy anay rehetra ao amin'ny TW sy FB izahay mba hizara vaovao sy hanampy anay hampahafantatra ny olom-pirenena araka ny marina sy tsy mitanila.
Serba manam-pahaizan'ny haivarotra an'aterineto, Nemanja Živkovic nampitaha ny fandraràna tao Montenegro tamin'ny fandraràna ny Twitter niainany tao Torkia.
Inona no tanjona amin'ny fanakanana ny media sosialy kanefa mora loatra ny mandresy azy io? Mihevitra ireo izay manatontosa izany ao amin'ny governemanta fa afaka manakana sy manampim-bava ny fivezivezen'ny vaovao izy ireo amin'ny alalan'ny fandraràna ny Media Sosialy iray. Tena matotra!? Tsy misy olona hilaza azy ireo ve fa tsy misy dikany izany fa hitody, imbetsaka, any amin'izy ireo tahaka ny “Boomerang”? Angamba tsia. Mazava ho azy fa tsy manaraka ireo ohatra tamin'ny lasa izy ireo raha niezaka nanao izany ny firenen-kafa.
Niresaka momba ny tsy fahampian'ny fiarovana ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny media nomerika ilay Montenegrin mpanolo-kevitra momba ny media, Ana Bogavac.
Vao nandany lalàna vaovao ny @tenaprelec. Tsy milaza na dia kely monja momba ny Media Vaovao, mamela ity faritra manjavozavo ity hisokatra amin'ny fihoaram-pahefana ataon'ny mpanohitra sy ireo eo amin'ny fitondrana
Naverina tamin'ny 7:30 hariva ny fidirana ao amin'ny Viber rehefa nikatona ny birao fandahatsaham-bato. Nanambara izany tamin'ny iray amin'ireo kaontiny Twitter ny CDT:
Nanomboka niverina indray ny Viber karajianay!
Fandresen'ny tsy manova na inona na inona?
Olana maromaro no nipoitra nandritra ny tontolo andro, manomboka amin'ny “olana ara-teknika” ho fanomezan-dalana ny rehetra hiditra, ka hatramin'ny “rivotry ny fanonganam-panjakana”, izay nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fahafahan'ny olom-pirenena, araka ny filazan'ny kandidàn'ny mpanohitra Neđeljko Rudović.
Tsy tafiditry ny olona manana fahasembanana ny tranoben'ny orinasam-panjakana Mpaninjara Herinaratra ao Herceg Novi.
Nanohy nanome vaovao avy eny ifotony nifototra tamin'ny asa fanaraha-mason'izy ireo ny Fikambanana Tsy Miankina Mpanaramaso ny Fifidianana CDT sy CeMI .
Nanao bilaogy mivantana nandritra ny androm-pifidianana ny vondrona media tsy miankina Balkan Insight. Avy amin'ny valin'ny fitsapan-kevitra no naminavin-dry zareo fa ny Praiminisitra ela nihetezana Milo Đukanović, filohan'ny Antoko Sosialista Demokraty no nahazo ny 36 tamin'ireo seza 81 ao amin'ny parlemantan'i Montenegro. Ahafahany manangana governemanta maro an'isa izany, raha misafidy hiaraka aminy ireo antoko kely.
Rehefa nampifandimbiasiny ny toeran'ny Praiminisitra sy ny Filoha, dia i Đukanović no filoha maharitry ny Antoko Sosialista Demaokraty ao Montenegro, izay nitondra an'i Montenegro hatramin'ny nampidirana ny rafitra ara-politika maro-antoko tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1990.
Niforona tamin'ny 1991 toy ny mpandimby ny Ligin'ny Komonista ao Montenegro ny antoko, izay nitondra an'i Montenegro tao anatin'i Yogoslavia hatramin'ny 1945.
Mbola zaza aho tamin'i Milo tonga teo amin'ny fahefana. Raha ela velona aho, dia mety efa raibe rehefa mametra-pialàna izy
Mandray an-tsoratra i Gruevski.
12 ora izayRosia